35 ၏ Lightning Feet တွင်အက်ပဲလ်က USB-C cable အတွက်6$ ကိုငွေတောင်းခံလိုက်သည်။ ဒီတစ်ခုက 9,99 $ သာကျသည် - BGR - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ Lightning သို့ 35 Feet Cable သို့ USB-C အတွက် Apple6$ Bill - ဤတန်ဖိုးသည် 9,99 $ - BGR အတွက်သာဖြစ်သည်။
Apple က USB-C အတွက် 35 $ အား6Lightning Feet Cable သို့ငွေတောင်းခံလိုက်ရသည် - ဒီတစ်ခုက 9,99 $ သာကျသည် - BGR
Tele RELAY တစ်ခု 10 အောက်တိုဘာလ 2019
အခြေခံအားဖြင့်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည့် 35 ၏ Lightning ခြေလျင်တွင် Apple သည်6ဒေါ်လာအား USB-C ကြိုးအတွက်ငွေတောင်းသည်။ ကေဘယ်ကြိုးအတွက် 35 $? အလေးအနက်ထား!? အဆိုးဆုံးကတော့အရည်အသွေးမြင့်ကေဘယ်လ်တောင်မှမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထို့ကြောင့်ကြိုးသည် connector နှင့်တွေ့သောအခါအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် Amazon မှာအခုတွေ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ 93 $ cable ကိုစုဆောင်းရန် checkout တွင်ကူပွန် code XCENTZS18 ကိုအသုံးပြုပါ Lightcent သို့ Xcentz USB C သာ $ 9,99 များအတွက်!
လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်း - သင်၏ iOS စက်ကိုအားသွင်းရန်နှင့် 18A မှအမြန်အားသွင်းရန်သင်၏ကေတာ့ USB-C PD charger (Apple 29W 30W, 61W, 87W, သို့မဟုတ် 3W USB-C ပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်း charger) ဖြင့်အသုံးပြုပါ။ iPhone 8 / 8 Plus / X / XS / XR / XS Max, iPad နှင့်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များအတွက်။
အသိအမှတ်ပြု Apple MFi - ကေဘယ်တစ်ခုချင်းစီမှာ Apple iOS ထုတ်ကုန်များနှင့် 94% လိုက်ဖက်မှုရှိစေရန် Apple မှထုတ်ပေးတဲ့ authentication chip (C100) ပါ ၀ င်သည်။ စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးအပြင်မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းခြင်းနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုသေချာစေပါ။
အလွန့်အလွန်ကြာရှည်ခံသည် - ၎င်း၏ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနိုင်လွန်ကြောင့်ဤကေဘယ်သည် 30 000 ထက်ပိုမိုသောအားဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး 175 ပေါင် (80 kg) အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်။ Hard 30 သည်အခြားကြိုးများထက်အဆပေါင်းများစွာပိုရှည်သည်။
အားသွင်းခြင်းနှင့်စည်းညှိခြင်း: Lightning connector နှင့်သင်၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod ကိုသင်၏ Mac နှင့် iPad Pro နှင့် USB-C သို့မဟုတ် Thunderbolt3(USB-C) နည်းပညာဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက်အားသွင်းပါ။ 19659004] တစ်သက်တာအာမခံ - ဒီကေဘယ်ကိုကြာရှည်ခံဖို့တည်ဆောက်ထားတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အမှာစာတစ်သက်တာအာမခံကိုပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ 24 နာရီအတွင်းကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြင့်သင့်အားဖြေကြားပေးပါမည်။
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်၏သငျသညျအသိပေးထားရန်။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ တချို့ကကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား BGR
ဤ 140 $ သည်တူညီသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်နှင့် 400 $ + Dyson - BGR ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက်များကိုစုပ်ယူသည်။
တစ်ယူနစ်အတွက်5$ သာလျှင် Alexa နှင့် Google နှင့်လိုက်ဖက်သော smart ပလပ်ဂင်များ BGR သည်မည်သည့်အခါမျှအသုံးမကျပါ
Inde: L'extrémisme de gaucheaété réduit de 43% au cours des5dernières années: MHA | Inde Nouvelles
အဆိုပါဘန်ဝစ်သတင်းစာ 19 2019 နိုဝင်ဘာလ - ဗွီဒီယို
ကိတ်နှင့်ဝီလျံသည်ရှားရှားပါးပါး PDA အခိုက်အတန့်ကိုပြသခဲ့သည်
Guelleh သည်ဂျူဘူတီ၏လုံခြုံရေးကောင်စီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် JobbeAfrique.com ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသည်
[Tribune] Other of Africa - JeuneAfrique.com
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်301
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,703
TECH & Telecom2,615